Lapan'ny Imperial (Kyoto), Gosyo Palace - Kyoto
Asia Japana Kyoto
Ny lapan'ny imperial (Kyoto)
Address: 3 Kyōtogyoen, Kamigyō-ku, Kyōto-shi, Kyōto-fu 602-0881
Sito ofisialy: sankan.kunaicho.go.jp
Daty fanorenana: 1855
Ao afovoan- tanànan'i Kyoto no misy ny palace taloha Gosyo, izay nanompo hatramin'ny 1868 ho fonenan'ny fianakavian'ny mpanjaka, mandra-pifindra tany Tokyo renivohitra Japoney. Eo amin'ny lehibe, dia tamin'ny fanorenana ity tranobe ity no nanombohan'ny tantaran'ny fananganana ny tanàna. Ny lapan'ny governemanta Gosyo ao Kyoto no harena nasionalin'i Japana , izay mitahiry ny fahatsiarovana ireo taranaka maro nifandimby niaina tao. Tsy sahala amin'ny lapan'i Tokyo ireo mpizahatany afaka mankany Gosø miaraka amin'ny fitsidihana indroa isan-taona ary amin'ny fangatahana aloha.
Tantaran'ny Lapan'ny Imperial
Ny tantaran 'ity trano ity dia manomboka ny fiandohan'ny taonjato faha-7, fony i Heian (Kyoto ho avy) no nanangana ny renivohitr'i Japana. Ny tranobe voalohany dia naorina tamin'ny 794 tao afovoan-tanàna. Nandritra ny taona VII-XIII. Niverimberina ilay trano ary naverina tanteraka. Matetika ny fanorenana dia natao noho ny trano efa reraka. Fomba nentim-paharazana, nandritra ny asa fanamboarana ny tranon'ny mpanjaka, dia nafindra tany amin'ny iray amin'ireo lapa miavaka amin'ny zokiolona japoney. Ny Lapan'i Kyoto dia iray amin'ireo lapa tsy nisy tanany, ary tamin'ny XIV dia nanjary trano fonenana maharitra izy.
Ho an'ny endriky ny lapan'ny imperialista Gosyo dia naninjitra ny tanany tamin'ireo mpitondra hafa. Taorian'ny afo hafa dia nijanona ela ny trano, ary tamin'ny 1569 dia nanangana ny efitrano lehiben'ny mpanjaka i Oda Nabunaga, izay nipetraka tamin'ny faritra kely iray metatra 110 metatra. Ireo mpanaradia ara-politika Toyotomi Hideyoshi sy Tokugawa Ieyasu dia nanohy ny asa famerenana amin'ny laoniny, ary nanitatra ny faritry ny lapa. Matsudaira Sadanobu dia nanamboatra trano maromaro tao amin'ny làlan'i Heian.
Tamin'ny taona 1855 dia vita ny fananganana farany ny Lapan'ny Imperial, ary nanomboka tamin'izay dia tsy niova ny fisehoany.
Ny lafiny mampiavaka ny palace
Ny faritry ny Lapan'ny Imperial any Kyoto dia voahodidin'ny rindrina fotsy feno volom-borona, matevina, matevina. Ny halavan'ny lapa avy any avaratra dia 450 m, ary avy any andrefana - 250 m. Misy vavahady enina amin'ny manodidina ny fefy. Afaka miditra ao amin'ny vavahadin'i Kogomon sy Seysemon ireo mpitsidika. Fantatra fa ny Emperora ihany no mampiasa ny atsimo, ankehitriny, ny fandevenana, fidirana ao Kanray. Tahaka ny any amin'ireo tempolin'i Shinto maro, ny lavaka manodidina ny rindrina dia lavalava miaraka amin'ny fasika, ary ao amin'ny valan-javaboahary manodidina ny lapa sy ny dobo Imperial, ny pine, ny sakura ary ny ahitra.
Ao amin'ny faritra avaratry ny tokotany ny seza Xixing - sehatra iray lehibe indrindra amin'ny tranon'ny fandevenana, ary any avaratra-andrefana avy eo no ahitanao ny toeram-ponenan'ny filoha Seire. Misy ihany koa efitrano ho an'ny Empira, ny andriana ary ny printsy, ny efitranon'ny Tsunenogoden, ny Hall Training and ny Palaitso Tiako i Koogos. Ankoatra ny palace Imperial Gosyo, ao amin'ny kianja dia ny Lapan'i Sento sy ny mpizaha tany hafa, anisan'izany i Kanninomiya, ny fonenan'ny mpitsara. Manakaiky ny toerana misy rindrina kely - Miyajima Itucushima .
Ahoana no ahatongavana any amin'ny lapa manan-tantara?
Ny palace Imperial any Kyoto dia mora hita amin'ny metro. Any amin'ny birao foibe ao Kyoto, mila mifidy fiarandalamby mandeha amin'ny tsipika Karasuma ianao. Tsy haharitra 10 minitra ilay dia. Tsara kokoa ny miala amin'ny toeram-piantsonan'i Imadegawa, satria akaiky kokoa ny vavahady fidirana mankamin'ny trano lehibe sy ny biraon'ny masoivohon'ny Imperial. Mbola kely dia tsy maintsy mandeha any amin'ny fiantsonana Marutamati.
Zaridainana Botanical of Yemidji
Ny volana voalohan'ny ankizivavy iray
Soka-dranomà rot-driaka anaty akrôma
Honduras - zava-misy mahaliana
Takelaka kely mikraoba
Inona no azonao ahazoana vola any an-trano miaraka amin'ny tananao - ny hevitra tsara indrindra ho azonao
Ahoana no ahafantaranao fa ianao no jina?
Michael Fassbender sy Oscar-2016
Ahoana no fomba fitsaboana mastis ao amin'ny reny mampinono ao an-trano?
Fiterahana amin'ny taratasy amin'ny tananao
23 hevitra tsara izay hanampy anao hahazo vola fanampiny
Ny fahitana an'i Kamchatka